छोरा अगतिलो परेपछि टिचिङ अस्पतालमै कुहियो नन्दराम अधिकारीको शव……. – YesKathmandu.com
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा छोरो मार्नेहरूलाई सजायँको माग गर्दै तीन सय ३० दिन अनसन बसेका गोरखा, फुजेलका नन्दराम अधिकारीले ०७१ असोज ६ मा अनसनस्थलमै प्राण त्यागे । उनको शवलाई सरकारले अन्येष्ठि गरिदिने निर्णय गरेको पनि वर्ष दिन बितिसकेको छ । तर, न नन्दरामको अहिलेसम्म सत्कर्म भयो, न त सुरक्षित राखिएको उनको शवको अवस्थाबारे नै सरकारलाई चासो छ । अर्कातिर, न्याय माग्ने र अन्त्येष्ठि गर्नुपर्ने स्वभाविक जिम्मेवारी भएका छोरा नूरप्रसाद न बाबुको शवबारे चासो राख्छन्, न अदालतमा चलिरहेको मुद्दामै सरोकार छ ।
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नन्दप्रसादलाई पाँच महिनाअघिसम्म ४ नं. फ्रिजमा राखिएको थियो । तर, केमिकल सकिएको भन्दै पाँच महिनादेखि बेवारिसे शव राखिने च्याम्बरमा सडिरहेको छ । उक्त च्याम्बरमा पोहोर १२ र २९ वैशाखको भूकम्पमा ज्यान गुमाएका र हालसम्म सनाखत हुन नसकेका झन्डै सयको संख्याका लास छन् । नियमानुसार, अब केही महिनाभित्र लास सकार्न आफन्त नगए स्थानीय प्रशासनको सहमतिमा नष्ट गर्ने अधिकार सरकारसँग रहन्छ । नन्दराम त बेवारिसे हैनन् छोरो मार्नेलाई कारबाही गर भनेर अनसन बस्दाबस्दै आफैँ मरे । बाँचुञ्जेल सरकारले वास्ता गरेन नै, मरेपछि पनि फ्रिजमा राखिएको शवलाई बेवारिसेहरूको चाङमा फ्याँकिएको छ ।
अनि, तिनका छोराको ताल हेर्दा भन्न कर लाग्छ, धिक्कार छ– यस्ताले छोराको जन्म पाउनु, चितवन जिल्ला अदालतले नन्दराम, पत्नी गंगामायाका पक्षलाई साक्षी बकपत्रका निम्ति गत वैशाख ५ गते बोलायो । नन्दरामको निधन भइसकेका कारण जीवित आफन्तमध्ये कोही जानुपर्ने हो । सुरुदेखि नै उनीहरूको मुद्दा हेरिरहेका मानवअधिकारवादी नेता सुबोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसाइँ, अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्याल, इन्द्र अर्याल र बाबुराम गिरीहरू त्यसदिन चितवन पुगे । उनीहरूकै साथमा एकजना मानवअधिकारकर्मी महिला पनि गएकी थिइन् । नन्दराम र गंगामायाले तिनलाई छोरीजत्तिकै माया गर्थे ।उनले त्यसदिन साक्षी बकपत्रमा आइदिनका लागि नूरप्रसादलाई फोन गरिन् । जबकि, अपराधी नउम्किउन्, केस नउल्टियोस् भन्नका लागि नूरप्रसाद आफैँले चासो दिएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो । तर, ठीक उल्टो भयो । बकपत्रमा आउनु भनी खबर गर्ने महिलाले गरेको फोन उठाएनन् । फोन गएको १० मीनेटपछि आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै एसएमएस लेखे, ‘तपाईंले म फलानो भन्नुभयो । मेरो अनुभवमा तपाईंले मलाई फोनमा भनेको तरिकाले तपाईं पनि एउटा अपराधी, लाज पचेको आइमाईजस्तो लाग्यो । अदालत नगए उल्टिने, के भन्या त्यो ?’
नन्दरामका छोरा माथि उजुरी
यसरी आउनुपर्ने मान्छेले आउनुको सट्टा उल्टै खबर गर्नेलाई यातना हुने गरी म्यासेज पठाएपछि प्रहरीमा उजुर गरिन् । अहिले पनि टेकुस्थित अपराध महाशाखामा नूरप्रसादविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत उजुरी सुरक्षित छ । प्रहरीले उनको मोबाइल ट्रयाक गर्दा झापाका बासिन्दाको नाममा मोबाइल झिकिएको र काठमाडौं आसपासमै चलेको देखिन्छ ।
क्याम्पस प्रशासनले फेल भएका विद्यार्थी च्याप्दा आर आर क्याम्पसमा बबाल
आदिबासी जनजाती र दलित समूदायलाई राजेन्द्र महत्तोको आदेश ‘रगत बगाउन तयार हुनुहोस’
पुरस्कार शान्ति गृहलाई, अभिनन्दन गौतमलाई
जो एकै पटक करोडपतिबाट कंगाल भइन
मन्त्री बन्न नपाएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका १० सांसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको तयारी
फेसबुक प्रेमले युवती परिन् एउटा अचम्मको फन्दामा